YuIP.org - Bheka-IP yakho zomphakathi kanye nezizimele lakho le-IP Online.
YuIP.org Sebenzisa YuIP indawo ukuthola IP, ukuhlola nezimbobo evulekile, futhi ukuhlola ukubambezeleka ukuze amaseva amaningi kakhulu emhlabeni futhi anikeze inthanethi Ping umyalo.
IP yakho ku-intanethi
IP yakho Network Local
IP yakho kuyi-Internet, mina ebhekisela ikheli lakho le-IP umphakathi, okusho ukuthi ikheli le-IP ukuthi zonke iwebhusayithi ufinyelela angalubukela. Uma usebenzisa iseva elibambayo IP zomphakathi ukufanisa izilaleli yeseva elibamba lakho le-IP.
IP yakho ku-LAN, lokhu kuyafana ikheli lakho le-IP yangasese. lo-IP itholakala kuphela kumadivayisi axhunyiwe kunethiwekhi yakho yendawo. Ukuhlola ikheli lakho le-IP ku-LAN ukufinyelela le sayithi ukuncoma usebenzisa isiphequluli se-Chrome noma i-Firefox isiphequluli ngoba wonke umuntu azibone.
IP odlulisiwe oluhambisana ikheli lasesizindeni ukuthi kunenjongo ukukhomba idivayisi ukufinyelela isayithi inthanethi ngokusebenzisa i server Ummeleli we-HTTP. Kungenzeka ukuthi iseva elibamba sakho asilungiselwanga ukubonisa odlulisiwe IP. Ingabe kukhona ezinye izimo ezingase odlulisiwe IP azisebenzisayo umthwalo olinganiselayo.
I-ISP yakho, kulo mkhakha zama ukuthola inkampani obhekene kwakho ku-inthanethi.
ubambezelo esijwayelekile, ngiqonde isikhathi isilinganiso intanethi yakho ukuthumela nokwamukela umyalo encane kuwebhusayithi. Lokhu kwenzeka njalo futhi futhi uma ukufinyelela kuwebhusayithi. Ngakho emifushane isikhathi, ngokushesha ukuze uthumele futhi wamukele comandos.O uhlelo izozama ukushaya isivivinyo ukubambezeleka nge internet yakho usebenzisa iseva eliseduze AWS unga.